Fritz Kahn no loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny piozila Homo Machina | Famoronana an-tserasera
Fritz Kahn dia nitaona aingam-panahy ho an'ity lalao noforonina ity avy amin'i ART ary antsoina hoe Homo Machina. Andro vitsy lasa izay dia tonga tamin'ny telefaona Android hianatra momba ny anatiny sy ny vatan'ny vatan'olombelona raha toa ny fahitana azy amin'ny masinina feno humanoids.
Ity no asan'i Fritz Kahn, avant-garde ary fahitana ara-tsiansa fa ny sanganasany tamin'ny fanoharana dia nanjary loharanom-aingam-panahy ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika maro nandritra ny taona maro. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana azy io amin'ny finday Android isika, na dia manana ny fahafaha-manana azy hatramin'ny tompona iPhone aza ny taona 2018.
Lalao manaitra feno piozila hanehoana antsika ireo faritra sarotra indrindra amin'ny vatana olombelona tamin'ny alàlan'ny fanoharana mahatalanjona. Ny asa tanteraky ny ARTE, ny fantsom-kolotsaina fahitalavitra frantsay.
Izy io dia mitondra antsika ho amin'ny enigma fitantarana izay hahafahantsika mahafantatra ny fomba fitondran-tenan'ny sasany amin'ireo taova lehibe indrindra amin'ny vatan'olombelona, ​​toy ny fahitana na fiasan'ny taovam-pisefoana.
Ny vatan'olombelona dia miseho ho a orinasa goavambe nanomboka tamin'ny roapolo ary ao no misy andiana humanoid izay mahazo antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra. Tsy maintsy mampandeha maody isika mba hahafahan'ny rà mandriaka na ny hodi-maso hisokatra ho an'ny fahitana fotsiny. Toy ny tranga fanazarana.
Un lalao premium ho an'ny finday Android izay miavaka ihany koa amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny teny Espaniôla ary ny asa lehibe izay tanteraky ny ARTE amin'ny fahitana. Fomba tena tsara hampianarana ny ankizy ao an-trano, sy ireo izay tsy ao, ary izany dia ohatra lavorary ho an'ny karazana fampiharana na lalao hafa te hampianatra rehefa milalao. I tiako Hue dia lalao tsara hafa ho an'ny loko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Homo Machina dia misy amin'ny Android izao hahafantarana ny asan'i Fritz Kahn